अनार बोक्रा पेट दुखाइ-बवासीर र लौकी छीलन पखाला राहत लागि :: Nepal Post Dainik अनार बोक्रा पेट दुखाइ-बवासीर र लौकी छीलन पखाला राहत लागि | Nepal Post Dainik
अनार बोक्रा पेट दुखाइ-बवासीर र लौकी छीलन पखाला राहत लागि
February 19, 2020 मा प्रकाशित
७ फाल्गुन /तरकारी र फल बोक्रामा लुकेका छन् स्वास्थ्य रहस्य तिनीहरूलाई सुकेका पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ
अक्सर फूल र तरकारी चक्की बेकारी गल्ति हालियो छ, जबकि औषधीय तत्व समावेश गर्न जनसंख्या छ । यी धेरै रोगहरु सेंसर बचाते छन् । तरभुजा, सुन्तला, अनार, तोरई र बोतल लौका जस्तै धेरै फल र तरकारी हो जो चक्की मा सुकेका थुप्रै तरिकामा प्रयोग गर्न सकिन्छ.
तरभुजा बोक्रा : कब्जियत र एक्जिमा दूर हुनेछ
तरभुजा बोक्रा उपयोगी छन्. भने कब्जियत राख्छ गनगन त तरभुजा बोक्रा सहित, खान । बोक्रा नरम हुनुपर्छ. यो कब्जियत मासहयोग पाउनु यसबाहेक, दाद, एक्जिमा आदि. समस्या को भइरहेको मा दबाइ को आफ्नो सुखाने को अधिक बाल्न । खरानी मा जाने तोरी तेल मा प्रभावित ठाँउ पाउन, प्राप्त आराम।
मेवा बोक्रा : अनुहार मा चमक हुनेछ
जसको छाला सधैं नजर छ, तिनीहरूलाई लागि, यी लाभदायी छन् । मेवा बोक्रा छाला मा लागू गरेर आफ्नो हुसकिनेस छ । डुबेको मा गोलीगाँठो पाउन तिनीहरूले नरम बेहोसी औषधि मेवा चक्की सूर्य मा सुकेका पतले पिस्नु यो पाउडर, ग्लिसेरीन संग समग्र लिनिमेन्ट बनाउन र पाउन । छाला चमकदार हुनेछ ।
सुन्तला बोक्रा : समाप्त जिते संसारिक
केन्द्र साथै आफ्नो बोक्रा पनि अत्यधिक लाभदायी हुन्छ । यो हिट फोर्टिफिकेसन् साथै कब्जियत पनि राहत संलग्न. आफ्नो को सुकेका पाउडर. यसको चिया बनाउने पिउन । यो liniment गर्न सक्छन् मा अनुहार गर्न सक्छन्, यो छाला उज्ज्वल. सुन्तला टेल्को, सूर्य मा ड्राई तिनीहरूलाई पिस्नु. यो पाउडर को कच्चा दूध र बेसार मा मिश्रण अनुहार मा पाउन । यो छैन केवल मुखासे को डाटा छ बरु छाला पनि चमक उठ्छ । कागति बोक्रा को दाँत मा यो रगडना कोड देखि बलियो गठन गर्दै छन् । कागती र सुन्तला बोक्रा सुकेका असल पीस पाउडर बनाउन, यी दाँत मा घिसने रबर देखि दाँत चमकदार गठन गर्दै छन् ।
अनार बोक्रा : पेट दुखाइ र बवासीर राहत दिन्छ
महिलाहरु जसले बढी मासिक छुट्टी हुन्छ तिनीहरूले अनार सुक्खा आफ्नो पाउडर एक चम्चा मा पानी संग मिश्रण. यो रक्तस्राव कम हुनेछ र, को पेट मा दुखाइ राहत पनि पाउन । कि बवासीर को पाना तिनीहरूले ४ भाग अनार बोक्रा र ८ भाग गुड दिन नाली र पतले-दानेदार चक्की बनाएर केही दिन. पिउन । अनार गर्न, आफ्नो मुख मा यो राखन चुस्नु सम्झौता बन्द छ, सुन्दर छ । अनार चक्की पतले पाउडर, र यसमा निहित दही मिश्रण टाउको मा रगडना, केश नरम छन् ।
तोरई बोक्रा अनुहार सफाई
तोरई तरकारी खाना यति साधारण छ मा यसको बोक्रा गरे देखि तरकारी असन्तुलनको को पेट हटाउन सक्नुहुन्छ. तोरई ताजा बोक्रा छाला मा फिर्ता को छाला पनि सफा हुन्छ ।
अलैंची बोक्रा : दूर हुनेछ, जाडो-सर्दी
अलैंची पहाडहरु को चिया संग उबला पिउने देखि एक चिसो – सर्दी प्राप्त गर्न सहज छैन । साथै यी चक्की को चिया पत्ती मा खण्ड र पनि राख्न. यो बनाउँछ स्वाद चिया बढ्नेछ ।
बोतल लौका बोक्रा : पखाला मा लाभदायी
लौका र आफ्नो तरकारी को धेरै मान्छे जस्तै छ । यो मा आफ्नो कुकिंग को सट्टा पतले पाउडर संग, पानी पिउन । समस्या को पखाला मा लाभ प्राप्त.
यी पनि छन् फाइदा:
नरिवल हुन्छ टर्क, उनको राम्रो परिश्रम थप्न, एक सानो नुन डेन्टिफ्रिस प्रयोग.
टमाटर र चुकंदर चिको अनुहार मा लागू गरेर अनुहार चमक र ओठ, राता बढ्दो छ ।